FURITAANKA IMTIXAANKA SOO GALITAANKA SANAD DUGSIYEEDKA 2020-2021 EE JAAMACADDA BENADIR - Benadir University
Benadir University > Uncategorized > FURITAANKA IMTIXAANKA SOO GALITAANKA SANAD DUGSIYEEDKA 2020-2021 EE JAAMACADDA BENADIR
Jaamacadda Benadir ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka bilowday maanta Wejigii koowaad ee imtixaanka ogolaanshaha ama Qubuulka ee Jaamacadaas sanad dugsiyeedka 2020-2021 kaasoo ay u fariisteen sanadkan arday fara badan oo ka soo baxday dugsiyada sare ee dalka.
Guddoomiyaha Jaamacadda Benadir Dr. Maxamed Maxamuud Xassan Biday ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay soona dhoweynayo ardayda faraha badan ee u fariistay Imtixaanka ogolaanshaha ee Jaamacadda Banaadir.
“Waxaa farxad inoo ah maanta inaan bilowno Imtixaanka qubuulka ee Jaamacada Benadir ee sanadka 2020-2021, waxaana u fariisanaya sanadkan arday saddex kun ku dhow, taasoo muujineysaa, khibrada sumcada, tixgelinta iyo karaamada ay Jaamacaddu ku leedahay bulshada, imtixaankana waa mid qiimeyn ah oo lagu ogaanayo heerka waxbarashada arday walba” ayuu yiri Dr. Biday
Guddoomiyaha Mu’asasada Banaadir Dr. Maxamed Dheere ayaa isna u mahad celiyey waalidiinta Soomaaliyeed ee caruurtooda ku aaminay Jaamacada Benadir, isagoo u balan-qaaday ardayda cusub iney Jaamacada ka heli doonaan aqoon tayo sare leh.
“Waxaad doorateen Jaamacad aqoonsi caalami ah heysata, waxaana kula dardaarmaynaa ardayda cusub iney dedaal badan muujiyaan kana mira dhaliyaan safarka waxbarasho ee u bilowday” ayuu yiri Guddoomiyaha Mu’asasada Benadir Dr. Maxamed Dheere.
Masuuliyiinta sare ee Jaamacada Benadir iyo macalimiin ayaa kormeeray imtixaanka kuwaasoo ku soo wareegay fasalada lagu qaadayey iyagoo u kuur galay qaabka uu u socday, waxayna ardayda tilmaamo iyo tusaalooyin ka siinayeen qaabka imtixaanka loo galayo iyo anshaxa looga baahan yahay.
Jaamacada Benadir ayaa Sanad walba xiligan oo kale waxaa ku soo biira arday fara badan oo soo dhameysatay waxbarashada dugsiyada sare ee dalka, waxaana taa bedelkeed ka qelin jebiya boqolaal kale oo muddo sanado ah wax ka baranayey 12-ka kuliyadood ee ay Jaamacaddu ka kooban tahay iyo qeybaha kale ee waxbarashada heerka labaad ee Masterka oo leh taqasusyo kala duwan.